बेरुजू र भ्रष्टाचार सम्बन्ध | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर बेरुजू र भ्रष्टाचार सम्बन्ध
रामुप्रसाद डोटेलको जन्म २०२४ सालमा पर्वत जिल्लाको लिमिठानामा भएको हो । उनले शङ्करदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापन सङ्कायमा २०४६ सालमा स्नातक र २०४९ सालमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी २०५१ सालमा नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको लेखापरीक्षण अधिकारीबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् । उनीसँग राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षणसम्बन्धी तालीम तथा प्रशिक्षण दिएको अनुभव रहेको छ ।
बेरुजू र भ्रष्टाचार
महालेखा परीक्षकको भर्खरै सार्वजनिक गरिएको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू. ५ खर्ब पुगेको र यस वर्ष लेखापरीक्षण गरिएका सरकारी निकायमा कुल कारोबार अङ्कको ५ दशमलव ४१ प्रतिशत बेरुजू रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसले आर्थिक प्रशासनमा व्याप्त बेथिति र विसङ्गति रहेको सङ्केत गरेको छ । कतिपयले यो बेरुजूलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस सन्दर्भमा बेरुजू र भ्रष्टाचारमा अन्तर्निहित विषयवस्तुलाई मनन गर्न जरुरी हुन्छ । बेरुजू भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याएको वा नियमविपरीत गरिएको आर्थिक कारोबार वा नपाउने भुक्तानी दिएको, असुलउपर गर्नुपर्ने राजस्व असुल नगरेकोलगायतका विषय पर्छन् भने भ्रष्टाचार भन्नाले कर्मचारी आफैलाई, कुनै व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले प्राप्त अधिकार वा सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने काम हो । भ्रष्टाचार हुनका लागि लाभप्राप्त गरेको वा लाभप्राप्त गर्ने मनसाय राखेको हुनुपर्छ । तसर्थ सबै बेरुजू रकम भ्रष्टाचार हुन सक्दैन । बेरुजूमा जानेर वा नजानेर भएका गल्तीकमजोरी, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार वा स्रोतसाधनको मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी उपयोगका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनका विषयहरू समावेश हुन्छन् । गलत आशय नलिई भएका गल्तीकमजोरी सुधारका लागि दिएका सुझाव वा औंल्याएका बेहोराहरू बेरुजू भए पनि भ्रष्टाचार होइनन् । त्यसैले बेरुजू र भ्रष्टाचार दुई फरक विषय हुन् ।
एउटा सत्य विषय के हो भने बेरुजूले भ्रष्टाचारको सङ्केत गर्छ । बेरुजू विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । जस्तै : असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की आदि । ती बेरुजूमध्ये कतिपय गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् भने कतिपय सामान्य प्रक्रिया नपुगेका मात्रै पनि हुन्छन् । गम्भीर प्रकृतिका बेरुजूमाथि थप छानविन, अनुसन्धान गरेमा भ्रष्टाचार भएको नभएको थाहा हुन सक्छ । तर, बेरुजू पहिचान गर्ने क्रममा त्यसप्रकारको छानविन र अनुसन्धान गरिएको हुँदैन जुन लेखापरीक्षणको दायरामा समेत पर्दैन । लेखापरीक्षण विश्वासबाट शुरू हुन्छ र नमूना छनोट गरी परीक्षण गरिन्छ भने भ्रष्टाचारको छानविन शङ्काको घेराबाट शुरू हुन्छ र विस्तृत छानविन, अनुसन्धान र बयान लिने काम हुन्छ । तसर्थ, बेरुजू पहिचान गर्न अवलम्बन गरिएका विधि र प्रक्रियाले मात्र भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदैन । यो अन्तरराष्ट्रिय मान्यता हो ।
बेरुजू फछ्र्योट गर्ने बेग्लै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिएका छन् । कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिक्रिया वा स्पष्टीकरण दिएर, असुल गरेर, नियमित गरेर, सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई निर्देशन दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेर, मिनाहा दिएर बेरुजू फर्छ्योट गरिन्छ । सोही प्रक्रियाबाट ५५औं प्रतिवेदनको अवधिमा रू. ५२ अर्ब बेरुजू फर्छ्योट भएको समेत देखिन्छ । तर, भ्रष्टाचारमा प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गरी सजाय भएपश्चात् मात्र टुङ्गो लाग्छ । बेरुजूलाई भ्रष्टाचार मानेर दायर भएको एक मुद्दामा बेरुजू कानूनबमोजिमको प्रक्रियाबाट फर्छ्योट गरिने भएकाले भ्रष्टाचार भएको भन्न मिल्दैन भनी अदालतले व्याख्यासमेत गरेको छ । तथापि बेरुजूलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिएर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा छानविन गर्न सकिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारजन्य थुप्रै विषय समावेश भएका छन् । यस्ता विषयमा छानविन भई मुद्दा दायर भएको अवस्था पनि छ । भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी भएको क्षेत्रमा लेखापरीक्षण गर्दा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । भ्रष्टाचार हुन सक्ने विषयमा ध्यान नदिई लेखापरीक्षण गरेमा त्यसलाई पेशागत जिम्मेवारी पूरा नगरेको मानिन्छ । त्यसैले लेखापरीक्षण योजनामा नै बढी भ्रष्टाचारको जोखीम हुने क्षेत्रहरू खरीद, निर्माण, मूल्यवृद्धि, दाबी भुक्तानी, म्याद थप, सरकारी सम्पत्तिको व्यक्तिगत प्रयोग, राजस्व चुहावट तथा कर छलीका मुद्दाहरूमा ध्यान दिएको हुन्छ । यस्ता विषयमा देखिएका बेरुजूमा व्यक्तिगत वा समूहगत अनुचित लाभ पुर्‍याउने मनसाय निहित भएमा भ्रष्टाचार हुन्छ । विश्वका कतिपय मुलकमा लेखापरीक्षण गर्ने निकाय र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय एउटै रहेको उदाहरण पनि पाइन्छ । कतिपय देशमा बेग्लाबेग्लै भए पनि एकआपसमा समन्वय र सूचना आदानप्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यस प्रकारको कानूनी व्यवस्था देखिँदैन ।
लेखापरीक्षणले बेरुजू औंल्याउँछ भन्ने डरले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आर्थिक अनियमितता र स्रोतसाधनको अपव्यय नियन्त्रण गर्ने भएकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ । तथापि सबै बेरुजूलाई भ्रष्टाचारको रूपमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन र बेरुजूमा भ्रष्टाचारको विषय समावेश हुँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिँदैन । सारांशमा बेरुजू आर्थिक अनियमितताका सूचक हुन् भन्नेचाहिँ बिर्सनु हुन्न । बेरुजूको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको भए कारबाही गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
बेरुजू घटाउन संयन्त्र नै चाहिन्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल, नेपाल
नेपालमा भ्रष्टाचार र बेरुजूको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
सामान्यतया बेरुजू र भ्रष्टाचार एकै हो भन्ने बुझाइ पाउँछौ, तर त्यो होइन । भ्रष्टाचार र बेरुजू नेपालमा विकराल बन्दै आएको छ । भ्रष्टाचारले देशमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । गरीब र धनीबीच खाडल ल्याउँछ । भ्रष्टाचार आपराधिक मनसायले गरिएको हुन्छ, जसका कारण भ्रष्टाचार र बेरुजू बिल्कुलै फरक विषय हो । काम गर्दै जाँदा हुने सामान्य त्रुटिलाई बेरुजू भनिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन नसक्नुका कारण के हुन् जस्तो लाग्छ ?
कानूनलाई मिचेर अर्थतन्त्र र सामाजिक रूपमा घाटा हुने गरी अरूलाई हानि पुर्‍याउनु र नराम्रो आचरण प्रस्तुत गर्नु भ्रष्टाचार हो । कुनै पनि काम समयमै नगर्नु, जिम्मेवारीका साथ नगर्नु, काममा ढिलासुस्ती गर्नु, गर्नुपर्ने काम नगर्नु आदि सबै काम भ्रष्टाचार भए पनि आर्थिक लेनदेनलाई नै भ्रष्टाचारमा सम्मिलित गरेर बुझ्ने गरेको पाइन्छ । छिटै आर्थिक रूपमा बलियो बन्न चाहने मान्छेको प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यस्तालाई कानूनी दायरामा नल्याउँदा र प्रभावकारी कानूनी प्रक्रियामा सहयोग नपुर्‍याउँदा नीतिनियम भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र राम्रो मान्छेको चयन नहुँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।
नियन्त्रणको उपाय के हुन सक्छ ?
कानून छ, तर कार्यान्वयन छैन । यसले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ । यसलाई रोक्न सरकार पक्ष र सरोकारका निकायले पनि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
कस्ता निकायमा बेरुजू बढी पाइएको छ ?
पछिल्लो समय नेपालमा बेरुजू धेरै बढेको पाइन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहीनता, अराजकता र यसलाई सघाएको छ । देशमा पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बेरुजू एकदमै बढेको छ । अन्य निकायमा पनि देखिएको छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेको खण्डमा बेरुजू हुने हो ।
बेरुजूको समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ ?
यहाँ उपयुक्त निगरानी छैन जसले गर्दा बेरुजू बढिरहेको छ । बेरुजू घटाउन सङ्घीय तहमा प्रधानमन्त्रीको ठूलो भूमिका हुन्छ । कानूनी पक्षलाई सोचेर निर्देशन दिनु प्रधानमन्त्रीको अभिभारा हो । यसको अर्थ प्रधामन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा यो सबै काम गर्ने भन्ने होइन । यसका लागि छुट्टै संयन्त्र हुन्छ । त्यो संयन्त्रलाई चलायमान गर्नु र निर्देशन दिनुचाहिँ प्रधानमन्त्रीको काम हो । प्रत्येक घटनाको जवाफदेही हिसाबकिताब बुझाउनुपर्ने भएकाले यसबारे एउटा संस्थाको जस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने र खबरदारी गर्ने कामसँगै कानूनसम्मत सजाय दिलाउने कुरामा निर्देशन दिने काम प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । यो भएमात्र बेरुजू घट्न सक्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन थन्किएर बसेको छ । यसले दण्डहीनतालाई प्रेरित गरिरहेको छ । यो संसद्मा छलफलमा ल्याउनुपर्ने विषय हो तर ल्याइएको छैन । आशाको कुरा पनि छ । प्रधानमन्त्रीले बोलेका छन् कि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ । अब छिट्टै सरकारले गर्न सक्ने काम भनेको लेखा समितिको जिम्मेवारी लिएका विशिष्ट अधिकृतहरूलाई भेला गराई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखाइएका तथ्यमाथि छलफल चलाउनुपर्छ । त्यसलाई विश्लेषण गरी त्यहीअनुरूप अगाडि बढ्न सकियो भने महालेखा परीक्षकलाई काममा उत्साह जागाउँछ । यसले बेरुजू घट्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
वित्तीय व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार
अध्यक्ष, नेपाल लेखामान बोर्ड
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन एक चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा कार्यसम्पादनमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेही हुुँदैन । धेरै अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालमा एक सबल सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नियमकानून र संरचना रहेको छ । तर, कार्यान्वयनमा मात्रै समस्या रहिआएको हो ।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर कार्यान्वयनको शिकार बनेको छ । यसको पहिलो कारण हो, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र परियोजना सञ्चालनमा कार्यरत कर्मचारी र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको क्षमतामा कमी हुनु । दोस्रो कारण हो, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले जानी÷नजानी कानून र नियमले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियालाई पालना नगर्नु ।
कार्यालय प्रमुखको मूल्याङ्कन बजेट रकम खर्चको आधारमा गरिनु, अर्थात् खर्चलाई नै मूल्याङ्कनको आधार बनाइनुले पनि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो अनुशासनहीनता र स्रोतको दुरुपयोग भएको आमरूपमा अनुभूत भएको विषय हो । आमरुपमा सर्वसाधारणले अनुभूत गरेको र ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनले देखाएको कमजोर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कारक भ्रष्टाचार नै हो । नीतिगत भ्रष्टाचार पनि पटकपटक सार्वजनिक भएको र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भएको विषय हो ।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थाको व्यवस्था नरहेको होइन । तर, आपसी मिलेमतोमा व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले निर्णयमा संलग्न विभिन्न तहका अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ ।
उल्लिखित कुराहरू केन्द्रीय वित्तीय व्यवस्थापनको शिलशिलामा उठाइएका समस्या हुन् । अहिले नेपालमा ३ तहको सरकार छ । पहिले देखिएको अध्ययनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन ज्यादै कमजोर र उच्च जोखीमयुक्त रहेको देखिएको छ । स्थानीय सरकारको केही महीनाको खर्चमा पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यथेष्ट बेरुजू देखिएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुधार गरी चुस्त बनाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिँदै आएको छ । त्यसमा ‘ट्रेजरी सिङ्गल एकाउण्ट’को कार्यान्वयन, ‘पीईएफए एसेसमेण्ट’ र त्यसको कार्यान्वयन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको क्षमता वृद्धि, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको माध्यमबाट नागरिक समाजलाई सबल र सरकारलाई बढी पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउनेतर्फ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइआएका छन् ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रणको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । बेलाबेलामा आन्तरिक नियन्त्रणका क्रियाकलापहरू आन्तरिक लेखापरीक्षण, कार्यक्रमको निगरानी र पर्यवेक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण आदि गर्नु/गराउनु आवश्यक छ । यसले गर्दा सरकारी निकायको जवाफदेही बढ्छ र सर्वसाधारणले सुलभ सेवा पाउन सक्छन् ।
नयाँ प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनाले यो समस्या अझ बढी भयावह हुन सक्छ । त्यसका लागि समयमै आवश्यक ऐन, कानून र संरचना व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएमा अवश्य सुधार हुन सक्छ । सक्षम र पारदर्शी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनबाट भ्रष्टाचारमुक्त देशको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
बेरुजू रोक्न जवाफदेही र खबरदारी
सचिव, सार्वजनिक लेखा समिति
बेरुजू भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा नियमविपरीत तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबार जनाउँछ । यसरी हेर्दा हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ५०८ अर्ब पुगेको छ । आजभन्दा १० वर्ष पहिलेको प्रतिवेदनअनुसार करीब ९० अर्ब थियो । यसले हरेक वर्ष बेरुजू बढ्दै जाने प्रवृत्ति देखाउँछ ।
असूल गनुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी बेरुजू तीन प्रकारको देखिन्छ । असूल गर्नुपर्ने बेरुजू हरेक वर्ष करीब १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा गतवर्ष एनसेलको पूँजीगत लाभकरको कारणले करिब ४१ प्रतिशत पुगे पनि यस वर्ष भने करीब १६ प्रतिशतमा झरेको छ । सङ्कलन गर्नुपर्ने राजस्वभन्दा कम सङ्कलन गरेको, गर्नुपर्ने सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको र सरकारी कोष वा सम्पत्ति हिनामिना गरेकोमा यस्तो बेरुजू असूल गर्नुपर्ने हुन्छ । बक्यौता राजस्वको रकम गतवर्षसम्म करीब रू. १ खर्ब ३२ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष बढेर करीब रू १ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै शोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक सहायता र क्रणको रकम विगत केही वर्षदेखि ३५/४० अर्ब रहिरहनुले सरकारी ढुकुटीमा पर्ने चाप सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । असूल गर्नुपर्नेबाहेक नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजू हरेक वर्ष करीब आधाआधीजस्तो देखा पर्छ । सबै प्रकारका बेरुजू भ्रष्टाचार नभए पनि सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग भने अवश्य हो । त्यस्तै बेरुजूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नसमेत सहयोग पु¥याएको छ र भ्रष्टाचार प्रमाणित भई सम्बन्धित पक्षले कारबाही भोगेका उदाहरण पनि धेरै छन् । यसरी बेरुजूको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सार्वजनिक कोषमा सङ्कलन हुनुपर्ने रकम प्रभावकारी रूपमा नभएको र यसको सदुपयोगमा निरन्तर कमी आई आर्थिक सन्तुलन खलबलिएको अवस्था छ । सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी एवम् उपलब्धिमूलक तुल्याउन सार्वजनिक आर्थिक कारोबार तथा लेखाङ्कनमा स्वच्छता, जवाफदेही एवम् पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । तर, नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भने समस्याग्रस्त रहेको छ । बढ्दो आर्थिक घोटाला, अनियमितता र अपव्ययजस्ता कारणहरूले लेखापरीक्षण बेरुजूमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । बेरुजू भएर के हुन्छ र भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा आर्थिक अनुशासनहीनतामा तीव्रतर वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक निकायहरूको खर्च प्रक्रिया र काम कारबाहीको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरीद र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानूनहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरिएको पाइन्छ । आर्थिक अनियमितता अर्थात् घोटालाका प्रकरण एकपछि अर्को थपिँदै छन् । आर्थिक अनियमितताका प्रकरणहरूबाट राज्यलाई हुने नोक्सानीको समष्टिगत मूल्य अर्बाैं हुन सक्छ । यसबाट मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ । यस्ता घोटालाका कारणहरूमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै क्षेत्रका पदाधिकारी जिम्मेवार देखिन्छन् । विधिको शासनलाई बेवास्ता गर्ने एवम् दण्डहीनताको निरन्तरता नै यसका कारक तत्त्व हुन् ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजू फर्छ्योट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र बेरुजू फर्छ्योट गर्न लगाउने दायित्व लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था गरेको छ । बेरुजूको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र कार्यालयले बेरुजू फर्छ्योट गरी सम्परीक्षण गराउनुपर्ने र सो नगरेमा महालेखापरीक्षकले लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्ने र निजले बेरुजूउपर कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
लेखाउत्तरदायी अधिकृतले पनि कारबाही नगरेमा महालेखापरीक्षकले विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान ऐनले गरेको छ । बेरुजूको लगत केन्द्रीयस्तर र कार्यालयस्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्योट हुन नसकेका बेरुजूहरू फर्छ्योट समितिबाट फर्छ्योट गराई लगत कट्टा गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले बेरुजू फर्छ्योट गरे वा नगरेको अनुगमन गरी नगरेको भए प्रचलित कानूनबमोजिम फछ्र्योट गर्न लगाउने दायित्व लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्थाले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जबाफदेही बनाएको छ । लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजू प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराई वा असूलउपर गरी फर्छ्योट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्ति वा कार्यालय प्रमुखको रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ बमोजिम असूलउपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजू रकम सम्बन्धित कार्यालयले नै असूलउपर गर्नुपर्छ । सम्बन्धित कार्यालयले १ वर्षभित्र पटकपटक कारबाही गर्दा पनि असूलउपर गर्न नसकेमा त्यसको कारण खोली लेखाउत्तरदायी अधिकृतसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । यसरी पेश हुन आएको बेहोरा लेखाउत्तरदायी अधिकृतले केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत पठाउनुपर्छ । बेरुजू फर्छ्योटको कारबाही नगर्ने तथा दिएको जवाफ पनि सन्तोषजनक नभएमा तालुक कार्यालय प्रमुखले ऐनबमोजिम जरीवाना वा सेवासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारवाही वा दुवै कारवाही गर्न सक्नेछ । समयभित्र सम्परीक्षण हुन नसकी बाँकी रहेका बेरुजूहरू लेखाउत्तरदायी अधिकृतले ऐनको दफा २३ बमोजिमको बेरुजू फछ्र्योट समितिमा पेश गरी फर्छ्योट गराई लगत कट्टा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी वर्षेनि बढिरहेको लेखापरीक्षण बेरुजू असूल तथा फछ्र्योटका लागि विद्यमान संस्थागत संरचना प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खर्चमा बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनतालाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रस्ट्याउँछ । बेरुजू कायम हुन नदिने गरी आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, लेखापरीक्षणको समयमा आवश्यक कागजात प्रमाण पेश गरी बेरुजू कायम हुन नदिने, कायम भएको बेरुजू फर्छ्योट गर्ने गराउनेतर्फ जिम्मेवारी बोकेको सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय आयोगको शिथिलताले गर्दा आर्थिक अनुशासनहीनताको बढ्दो छ । मख्य सचिवको नेतृत्वमा रहने बेरुजू अनुगमन मूल्याङ्कन समितिको कार्यपद्धति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा यस समितिले कर्मकाण्डी काम मात्र गरेको प्रतीत हुन्छ । यस समितिले हरेक वर्ष बेरुजू फर्छ्योटको लक्ष्य तोक्ने, सोहीअनुरूप सजिलो बेरुजू फर्छ्योट गर्ने र पुरस्कार वितरण गर्ने काममा मात्र यो समिति सीमित रहेको देखिन्छ । बेरुजू असूलउपर गर्ने जिम्मेवारी भएको केन्द्रीय तहसिल कार्यालयसमेत आफ्नो भूमिकामा प्रभावकारी देखिँदैन । आर्थिक अनुशासन कायम गराउन विगतमा सार्वजनिक लेखासमितिको भूमिका प्रभावकारी रहेको कारणले नै यस समितिलाई आम नागरिकले उच्च मूल्याङ्कन गरेका थिए । तर, महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमाथि समयबद्ध छलफल भई सम्बन्धित निकायलाई समयमै जवाफदेही बनाउन नसकेका विषय र दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी नदेखिएकाले बेरुजू नघट्नुमा लेखासमिति पनि जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन ।
समितिमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेका विषयहरूलाई कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका आधारमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने, कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल थाल्ने, राजस्व चुहावट व्यापक हुने गरेकाले जोखीमका आधारमा छानविन गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापनका अनियमितताहरू जोखीमको आधारमा छानविन गरी सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार तुल्याउने काम समितिले गर्नुपर्छ । विगतमा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी कार्यान्वयन हुन नसक्नाका कारण पहिचान गरी कार्यान्वयन नगर्ने पक्षलाई जिम्मेवार तुल्याउनुपर्छ ।
सचिवालयले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने, समितिहरूका कार्यमा दोहोरोपन नआउने गरी समन्वयात्मक रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नेजस्ता क्रियाकलापलाई ध्यान दिएमा समितिको प्रभावकारिता बढ्छ । बढ्दै गएको बेरुजूले डर लाग्दो रूप लिँदै गएको स्थितिमा बेरुजू बढ्न नदिनका लागि पेश्की फर्छ्योट पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने र अनियमितता रोक्ने दायित्व रहेका सरकारी निकायहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, बेरुजू अनुगमन मूल्याङ्कन समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, केन्द्रीय तहसिल कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सकृय बनाइनुपर्छ । आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पक्षलाई समयमै जवाफदेही बनाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । बेरुजूको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक रूपले सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ र नागरिक समाजले पनि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।